Category: report - @mmunited
One month statistics for @mmunited #3
Steemit လုပ်တာ ဒီနေ့နဲ့ဆို သုံးလပြည့်ပါပြီ။ ရက်အားဖြင့် 91 ရက်ပါ။ တစ်ကယ်ဆိုရင်တော့ 92 ရက်မှ ပြည့်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ရက်စောပြီးတင်လိုက်ပါတယ်။
Outgoing vote ကတော့ ၁၃၁ vote ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် vote ပြန်ပေးထားတာမရှိပါဘူး။
1 @dpakyaw 9.4
2 @sanhtun 7.6
3 @bobokyaw 7.4
4 @mamamyanmar 7.2
5 @minsoenaing 6.8
Self vote ကလုံးဝမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော့်ကို upvote ပေးတဲ့သူ ၃၇၄ ယောက်ရှိပါတယ်။ အဓိက vote ပေးတာကတော့ @steemmonsters, @steem-plus, @jarunik စတာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ @steempress-io, @steem-ua စတာတွေကတော့မပါပါဘူး။ နောက် chart တစ်ခုမှာ ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
1 @steemmonsters 25.8
2 @steem-plus 24.4
3 @jarunik 4.2
4 @dpakyaw 4.2
ဒါကတော့ ပိုတိကျမယ်ထင်ပါတယ်။ @steempress-io,@steem-plus, @steemmonsters, @steem-ua, @dpakayw စတာတွေကတော့ ကျွန်တော့်ကို upvote အများဆုံးပေးတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Owned/Delegated/Leased 411.39 120 120
100%/75%/50% 0.02 0.02 0.01
Followers/Following 302 273
Posts/Comments 111 1168
Outs/Ins 1100 7729
All Time 2.13 183.95
Last 30 Days 1.32 38.51 4.47 27.26 64.19
Last7Days 0.32 12.49010.12 20.77
တစ်လအတွင်းမှာ SP တိုးနှုန်းက 30 လောက်ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ နောက်လမှာလဲ အဲ့ဒိလောက်ပဲရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အခြား SP များတဲ့သူတွေဆီက upvote မရရင်တော့ ဒီအတိုင်းပဲသွားနေမှာပါ။ နောက်လမှာတော့ upvote နဲ့ comment တွေပိုများလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့ မြန်မာစာကို မဖတ်တတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒိတော့ ပိုစ့်မှာ vote ပေးတဲ့သူများနေဖို့ comment တွေများနေဖို့ပဲလိုပါတယ်။ ဒါဆိုရင် support တွေက အလိုလို ရလာမှာပါ။
အခုအချိန်မှာတော့ C<sup>2</sup> မှာ မြန်မာ channel တစ်ခုရနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ upvote ကို လဲ ကိုယ့်ဘာသာပေးလို့ရနေပါပြီ။ သိပ်မကြာခင်မှာ esteem မှာလဲ အလားတူလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ ဒီအတွက်တော့ မြန်မာ စတီးမစ် မိသားစုတွေရဲ့ ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုတွေ လိုပါတယ်။ esteem app ကို သုံးပြီးပိုစ့်တွေရေးပေးဖို့၊ quality ပိုစ့်တွေ ရေးပေးဖို့ စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အနာဂတ်ဆီသို့
Please ignore @automation, @banjo and @cleverbot.
One month statistics for @mmunited #1
Steemit လုပ်တာ ဒီနေ့ဆိုရင် နှစ်လပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ ရက်အားဖြင့် ၆၂ ရက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ 31 ရက်ဖြစ်တဲ့ လက နှစ်လဆိုတော့ နှစ်လနဲ့ပဲ တွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Outgoing vote ကတော့ ၁၀၇ vote ရှိပါတယ်။
1 @bobokyaw 9.6
2 @mamamyanmar 4.8
3 @dpakyaw 4.7
4 @aggamun 3.8
5 @minsoenaing 3.5
Self vote က ၀.၂ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို vote ပေးတဲ့သူ 2208 ယောက်ရှိပါတယ်။ paid vote တွေလဲပါပါတယ်။ဒီနေရာမှာ ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော့်ကို ပုံမှန် vote ပေးနေတဲ့ @steempress-io တို့ @sanhtun တို့ minnowsupport စတာတွေမပါဝင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
1 @knircky 12.8
2 @dpakyaw 6.8
3 @suyutu 1.6
4 @kaliju 1.5
5 @paulag 1.5
6 @reonlouw 1.1
7 @minsoenaing 1.0
ဒါကတော့ ပိုတိကျမယ်ထင်ပါတယ်။ @steempress-io,@hr1, @knircky စတာတွေကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ top voters တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တာတွေကတော့ paid vote တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ friend တွေကိုတော့ အပေါ်ကဇယားမှာ ဖော်ပြထားခဲ့ပြီးပါပြီ။
Owned/Delegated/Leased 316.05 170 270
100%/75%/50% 0.01 0.01 0.00
Followers/Following 255 187
Posts/Comments 80 777
Outs/Ins 719 5638
All Time 0.84 109.9
Last 30 Days 0.64 38.97 14.59 46.02
Last7Days 0.04 17.51 1.51016.18
Project Prometheus: Week #3 update
I will also write this post in burmese language. ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ပို့စ်ရဲ့ payout က 1.4 STU ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Week #1 ထက်စာရင်တော့ ပိုများလာပါတယ်။ upvote ကနည်းသွားပြီး comment ကတော့များလာပါတယ်။ @ptcmyanmar ဆီကနေ ၁၀၀ SP ရထားပါတယ်။ SBI ရှယ်ယာ လေးခုရှိပါတယ်။ အ ခြား ရှယ်ယာတွေလဲ ဝယ်ဖို့ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
@steempress-io, @minnowsupports, @hr1, @minsoenaing, @accelerator, @mamamyanmar, @myothuzar, @steempress and others.
ရည်မှန်းချက်ကတော့ SP ၅၀၀ အထိ ရောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ရက်ကို 1 SP လောက်ရဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဒီ တစ်ပတ်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ Self-vote မရှိတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသူတွေကို upvote ပိုမိုပေးနိုင်ဖို့အတွက် Self-vote ကို မလုပ်တော့ပါဘူး။
Owned/Delegated/Leased 95.04 100 20
Followers/Following 218 36
Posts/Comments 48 367
Outs/Ins 434 3524
Last7Days 0.22 9.273.56012.46
မူရင်းလင့်ခ်ကို ဒီနေရာမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် steemit ကို ၂၀ ရက် ခုနှစ်လ ၂၀၁၈ မှာ စလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ဆို ၃၂ ရက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ Voting အချက်အလက်တွေကတော့ 23-7-2018 ကနေ 22-8-2018 အထိပဲ ယူလို့ရပါတယ်။ SteemSQL ကနေ ယူရင်တော့ အကုန်ရမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ 1 SBD ပေးရမှာရယ် ကျွမ်းကျင်မှုမရှိတာရယ်ကြောင်း မသုံးတော့ပါဘူး။
Self-vote က ၁၃.၄ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ အောက်က ဇယားမှာတော့ ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်း မပြုတော့ပါဘူး။ Vote ပေးထားတဲ့သူ ၆၉ ယောက်ရှိပါတယ်။ ၁% နဲ့အောက်ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်းမပြုပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော့်ကို ပုံမှန် vote ပေးနေတဲ့ @steempress-io တို့ @sanhtun တို့ minnowsupport စတာတွေမပါဝင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
1 @sanhtun 10.7
2 @mamamyanmar 8.3
3 @ptcmyanmar 7.6
4 @khaylay 6.6
5 @bobokyay 5.9
6 @sumonthwe 4.1
7 @nyinyiphyo 3.4
8 @san.mgy 3.4
9 @suyutu 2.8
10 @phoeset 2.4
11 @rentmoney 2.1
12 @atgaday 2.1
Incoming vote ကတော့ ဝယ်ထားတဲ့ vote တွေများပါတယ်။ စုစုပေါင်း vote ပေးသူ ၆၀၇ ယောက်ရှိပြီးတော့ အတော်များများကတော့ ဝယ်ထားတဲ့ vote တွေပါ။ မိတ်ဆွေအချို့ရဲ့ vote တွေကိုပဲ ဇယားမှာပြသသွားပါ့မယ်။
1 @bobokyaw 4.3
2 @mamamyanmar 3.5
3 @suyutu 2
4 @paulag 1.9
5 @jackmiller 1.6
ဒါကတော့ ပိုတိကျမယ်ထင်ပါတယ်။ @steempress-io,@hr1, @minnowsupport စတာတွေကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ top voters တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တာတွေကတော့ paid vote တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ friend တွေကိုတော့ အပေါ်ကဇယားမှာ ဖော်ပြထားခဲ့ပြီးပါပြီ။
Owned/Delegated/Leased 63.83 100 20
Followers/Following 198 22
Posts/Comments 37 178
Outs/Ins 315 1256
All Time 0.21 56.92
Last 30 Days 0.21 30.75 21.27 7.07 53.87
Last7Days 0.08 8.43 3.91011.15
Ideas on Steem blockchain Series
Ideas on Steem blockchain part#4 – Pay it Forward Curation contest
Ideas on Steem blockchain part#3 – super8ballclub
Ideas on Steem blockchain part#2 – Upvote me Service in Steemchat
Ideas on Steem blockchain part#1 – Steembasicincome